Jiri nwayọ mee njem nwayọ n'oge ọkọchị a na dashcam / anya nlele anya | Akụrụngwa Akụkọ
Miguel Hernandez | 04/07/2021 16:10 | Emelitere ka 04/07/2021 16:16 | General, Nyocha
Ọ na-aghọwanye ihe na-ewu ewu na-eyi a dashcam n'ime ugbo ala anyi. Ọ bụ ezie na ndị ọchịchị nọ na Spain ekpebibeghị ịhazi okwu a, na mba ndị ọzọ dịka Russia ma ọ bụ United States, ha bụrịrị ngwaahịa nke ndị ọkwọ ụgbọala na-achọsi ike. Na nke a, anyị chọrọ igosi gị otu n'ime dashcams ndị kachasị mma anyị nwere ohere ịnwale ruo taa.
Ghọta na anyị Wolfbox G840H-1 enyo anya azụ na dashcam na igwefoto azụ, enyo elele anya na ihuenyo na ọtụtụ atụmatụ iji nye anyị. Nọnyere anyị, anyị ga-egosikwa gị ihe ngwaahịa a pụrụ iche nke dọọrọ uche anyị.
Dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile, na Actualidad Gadget anyị kpebiri iso nyocha a dị omimi na vidiyo dị mma, yabụ echefula ohere iji denye aha na ọwa anyị YouTube Na n'ezie hapụ anyị okwu na vidiyo ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, anyị ga-aza dị ka mgbe niile, ngwa ngwa o kwere mee. Yabụ ị nwere ike inyere anyị aka ịga n'ihu na-ewetara gị nyocha ndị a na-adọrọ mmasị.
3 Ntinye na antenna GPS
4 Ndekọ Dashcam na usoro ntinye ụgbọala
Ihe ngosi Wolfbox G840H a na-ahụ anya bụ ihe a ma ama, ihe buru ibu karịa nkezi nke enyo anyị na-ahụ kwa ụbọchị, nke ahụ bụkwa na ọ nwere ihuenyo 12-anụ ọhịa. Enyo anya azụ nwere centimita 34 x 1 x 7, yabụ ọ ga-ebu ibu karịa enyo enyo anya azụ. Ọ nwere ọnụahịa na-adọrọ mmasị na Amazon, lee anya.
N'ọnọdụ anyị, anyị etinyela ya na enyo azụ azụ nke Peugeot 407 ọ na-ekpuchi ya kpamkpam. Emere ya site na iko na-egbuke egbuke, nke ga-eme ka anyị hụ ihuenyo mgbe anyị chọrọ, ma ọ bụ jiri ya dị ka enyo na-ahụ anya. Na elu onu anyị ga-ahụ njikọ nke anyị ga-ekwu maka mgbe e mesịrị, na ala otu otu Central on / off button maka ihuenyo na ngwaọrụ zuru ezu, na azụ igwefoto bụ isi ga-arụ ọrụ dị ka dashcam, yana sistemụ nke ga-enye anyị ohere ịhazigharị ndekọ ndekọ.
Usoro ihe a na-agbakwunye usoro ARMCortex A7 abụọ nwere ike nke 900 MHz, karịa karịa maka arụmọrụ nke enyo Wolfbox nke na-arụ ọrụ ya na-enweghị nkwụsị ma na-agbanye ngwa ngwa ozugbo anyị malitere ịkwọ ụgbọala. N'ezie, anyị enweghị ihe ọmụma banyere ikike nke RAM nke ngwaọrụ ahụ na-akwali. Maka akụkụ ya, anyị nwere onye na-agụ kaadi microSD, nke a gụnyere na ikike nke 32 GB na enyo anya ga-ahụ maka ịchekwa na ihichapụ ọdịnaya dịka nhazi ahụ e kenyere.
Igwe n'ihu: Sony 5MP IMX415 na 2,5K mkpebi
Igwefoto na-aga n'ihu: Mkpebi 2MP FHD
Anyị nwere mpi GPS nke mpụga gụnyere na ngwugwu ahụ, yana igwefoto azụ nwere mkpebi 1080P nke nwere nkwado dị iche iche dabere na mkpa anyị. Ihuenyo, nke zuru oke, nwere mkpebi FHD karịa ezuru maka ịrụ ọrụ nke ọrụ kwa ụbọchị. Maka akụkụ ya anyị nwere G-Sensor nke ahụ ga-eme ndekọ mgbe ọ hụrụ ihe ọghọm, yana nlekota oru nleba Ọ bụrụ na anyị edozi ya na isi iyi na-adịgide adịgide nke na-enye ya ohere, ọ ga-adabere n'ụdị nrụnye anyị na-ebu n'oge ahụ.
Ntinye na antenna GPS
Ntinye ga-adị mfe karịa ka anyị chere. Banyere enyo anya azụ, anyị na-edozi ya na ụfọdụ ihe ntanetị nke e tinyere n'ime igbe ahụ na enyo anya azụ anyị ma a ga-agbanwe ya n'ụzọ zuru oke. Ugbu a metụ wiring, anyị na-amalite na miniUSB, nke m na-akwado ịgafe ebe kwesịrị ekwesị nke ụgbọala ahụ, Naanị anyị na-etinye eriri si n'elu, zoro n'azụ isi okwu, dị ka o kwesịrị ekwesị (ana m akwado ile vidiyo ahụ ma ọ bụ ịgụ ntuziaka na ngwugwu) na otu n'ime ọkụ ụgbọ ala.
Ugbu a anyị nwetara GPS antenna, Ejikọtara ya site na ọdụ ụgbọ mmiri ọzọ maka nzube a. Antenna nwere teepu 3M, yabụ ana m akwado gluing ya na ugegbe windo maka nsonaazụ kacha mma.
N'ikpeazụ, igwefoto azụ, eriri mita 6 gụnyere nke ga-ezu n'ọtụtụ ọnọdụ. Anyị na-etinye eriri site na upholstery ruo mgbe anyị rutere azụ. Anyị na-agafe eriri site na oghere nke oriọna ikike ikike ma kpoo igwefoto azụ na mpaghara etiti nke bompa na mpempe akwụkwọ ikike n'onwe ya na-enweghị ikpuchi ya. Ugbu a, gwuo jikọọ eriri uhie ahụ na otu waya ahụ na-enye ọkụ na ọkụ "ntụgharị", n'ụzọ dị otú a igwefoto ga-eme ka ebe ndị na-adọba ụgbọala rụọ ọrụ. N'ihe na-erughị awa abụọ ị kwesịrị ịmechara nwụnye zuru ezu. Site na usoro ndị a, anyị ga-emecha nwee usoro arụnyere.
Ndekọ Dashcam na usoro ntinye ụgbọala
The dashcam ga-eme loop ndekọ dabere na ntọala anyị, anyị nwere ike ịhazigharị ngalaba nke dị n'etiti 1 na 5 nkeji. Anyị nwere teknụzụ WDR nke na-ezere ọdịiche dị iche na ọkụ abalị iji nwee ndekọ doro anya. Site n'inwe G-ihe mmetụta, a ga-echekwa ihe ndekọ ahụ ma gbochie ya mgbe ọ na - achọpụta mmegharị na mberede, enwere ike ịme otu ihe ma ọ bụrụ na anyị emee "okpukpu abụọ" na ihuenyo ahụ.
Ọ bụrụ na anyị ejikọtara eriri uhie na nke ugbu a nke ọkụ na-agbanwe agbanwe, mgbe anyị webatara «R» ha ga-apụta ebe a na-adọba ụgbọala na elele azụ, nke anyị ga-ebu ụzọ dozie aka (site n'imetụ ihuenyo ahụ) nke mere na ọ na-enye anyị a pụrụ ịdabere na ya pụta. N'oge niile anyị ga - enwe ike ịhọrọ ma ị ga - ahụ n’azụ ma ọ bụ n’ihu igwefoto na ihuenyo ahụ, yana soro nchapụta ya na-emekọrịta site na ịpị n'akụkụ aka ekpe nke enyo ahụ.
Banyere GPS, Ọ bụrụ na anyị awụnyere ya nke ọma, ọ ga-enye anyị nhazi nke ebe anyị na-eme ndekọ yana ọ ga-egosi anyị ọsọ ọsọ na ezigbo oge n'akụkụ akụkụ aka ekpe nke enyo ahụ. Usoro a emeela nke ọma na ule anyị. Ndekọ abalị abụrụwokwa ezigbo mma, na-enweghị nsogbu ọ bụla na nke a.
Na ule anyị, igwefoto emeela nke ọma. O nwere igwe okwu dị n’ime ya ka anyị nwee ike idozi ma anyị chọrọ ka a na-edekọ ụda ahụ, n’otu aka ahụ na ntọala anyị ga-enwe ike ịhọrọ Spanish ka ọ bụrụ asụsụ. Ọ bụrụ na anyị emeela nwụnye nke ọma, nke bụ eziokwu bụ na anyị na-enweta nsonaazụ dị egwu ma achọpụtara m na ọ bụ sistemụ nchekwa kachasị mma na ọnụahịa kachasị mma anyị nwere ike ịwụnye iji gaa n'oge okpomọkụ a. Ọnụ ya na Amazon bụ euro 169, ọ bụ ezie na ọ na-enwe ọtụtụ ego dị ihe dị ka euro 15.
Gụnyere ihe niile maka ntinye
Na-arụ ọrụ nke ọma na ngwa ngwa
Morefọdụ na-enwu gbaa maka n'èzí
Ma eleghị anya, ọ buru oke ibu maka ụgbọ ala kọmpat
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Jiri nwayọ jiri njem a n'oge ụgbọ oloko a
Nnọọ. Enwere m mmasị na enyo azụ wolfbox G840H. Ọ ga-amasị m iji igwefoto azụ iji hụ ụmụ m n'oche azụ. Ichere na m ga-aba uru? Ana m ekwu nke a site na ntinye igwefoto na ntụgharị igwefoto (na ọ na-ele ihu ala). Daalụ